ညီရဲသစ်: တခါတုန်းက သီတင်းကျွတ်
Posted by ညီရဲသစ် at 20:31
စံပယ်ချို 13 October 2011 at 21:28
အဖွားက အင်းသူဆိုတော့ကျောင်ပိတ်တာနဲ့ ညောင်ရွှေဆင်းတော့တာပဲ
သီတင်ကျွတ်ကိုတော့မိုးလည်းအနှစ်သက်ဆုံးပွဲတော်ပါ။မီသီအလှဆင် ဆီမီးတွေထွန်းနဲ့ တကယ့်ပျော်စရာကောင်းခဲ့တာ...ခုတော့တစ်ယောက်တည်းဘာဖြစ်တာမှတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်အဝတ်စားသစ်ဝယ်ဝတ်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနေ့ထူးရက်တိုင်း အသစ်ဝတ်ချင် မိုးရောဂါကလည်းမသေးဖူး. ဘာပြောပြောဒီမှာ မြန်မာ့ဓလေ့တွေရှိနေတာကျေနပ်စရာပါနော်
ညိမ်းနိုင် 13 October 2011 at 21:50
Candy 13 October 2011 at 22:07
ဆီမီးတစ်ထောင် မျောတာတွေ့ဖူးချင်လိုက်တာ.. အရမ်းလှပါနော်... ကန်ဒီ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး... >.<
တော်သေးတာပေါ့.. သီတင်းကျွတ်ကယ်ပေလို့.. နို့မို့ ပိုစ့်အသစ်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး.. :P
ဒါနဲ့အစ်ကို ဘယ်တော့စားရမလဲ... :P (အိမ်ထောင်မရှိလောက်ဘူး ထင်လို့... မှန်ခဲ့ရင် မုန့်ကျွေးရန် :P )
ဖိုးကြယ် 13 October 2011 at 22:16
အို...မြောက်ပိုင်းလူညီချက်ကတော့ပြောမနေနဲ့ ဝုန်းဆို ဘယ်သူရိုက်လိုက်မှန်းတောင်မသိလိုက်ရဘူး :P အဲလေ ဝုန်းဆို အကုန်ထလိုက်ကြတာပြောပါတယ် :)
Thameesan 13 October 2011 at 22:33
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် 13 October 2011 at 22:39
ဆီမီးတစ်ထောင်ကို မျှောလိုက်ရင် မြစ်ပြင်တစ်ခုလုံ လင်းထိန်ပြီး သိပ်လှမှာပဲ။မြန်မာ့ဓလေ့လေးတွေဖတ်ပြီး ကြည်နူးသွားတယ်။
ပဥာက် 13 October 2011 at 23:01
Cameron 14 October 2011 at 00:10
blackroze 14 October 2011 at 02:06
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 14 October 2011 at 02:12
...သြော် ..လွမ်းရပါလား သီတင်းကျွတ်ရယ်....
အကိုရေ ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါလို့...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 14 October 2011 at 04:46
အိမ်မရောက်တာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကိုယ့်ရပ်ရွာက အမှတ်ရစရာတွေကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့သလို အမြဲတမ်းလဲ သတိရပါတယ်
သင်္ကြန်ထက်တောင် သီတင်းကျွတ်က အစ်မတို့ဆီမှာ ပိုစည်ကားတယ်
မြသွေးနီ 14 October 2011 at 18:39
ဒေသတစ်ခုစီရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ ချစ်စရာ ဗမာ့ဓလေ့လေးတွေ ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတရတယ်။
...အလင်းစက်များ 14 October 2011 at 20:59
ရေးတတ်တဲ့သူတွေ ရေးလိုက်တော့လည်း သီတင်းကျွတ်လေးက အနှစ်အရသာ ပြည့်စုံလို့ ဗျာ။ ကျနော်ကတော့ ခပ်ပေါပေါ့ပဲမို့ ... ဟီးဟီး။ လာအားပေးသွားတာ ကျေးဇူးနော်။
မြစ်ကျိုးအင်း 14 October 2011 at 22:43
သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်တွေ ပြန်မြင်ယောင်တော့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာလေးကို သတိရမိတယ်။ ဆီမီးမျောပွဲတော်ကို မရောက်ဖူးဘူး။ ကြုံချင်သေးတယ်။ ကြည်နူး ပျော်ရွှင်ဖို့သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
Maung Myo 15 October 2011 at 09:38
ချစ်စရာ ဓလေ့လေးပဲ ကိုရဲ တိုဲ့ရွာလည်း ကျနော်တို့ကတော့ မြစ်နဲ့ မနီးတော့ ဆီမီးမျှောတာတွေ မရှိဘူးဗျ သီတင်းကျွတ်ပြီဆိူရင်တော့ ပွင့်လင်းရာသီမို့ စည်ကားတာတော့ အမှန်ပဲ ။
တောက်ပကြယ်စင် 16 October 2011 at 03:29
ညီရဲရဲ့စာကို ဖတ်ပြီး ဘုန်းဘုန်းတို့ဘက်က သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို ပြန်မြင်ယောင်နေမိပါရဲ့။ ဘုန်းဘုန်းတို့ဘက်ကျတော့ မြစ်တွေ၊ ဘာတွေ မရှိတော့ ရောင်စုံပလပ်စတစ်ခွက်ထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ကြိုးနဲ့သီပြီး တိုင်နဲ့ ချီထားလိုက်တယ်။ ကာလသား၊ သမီးတွေက တစ်တိုင်စီကိုင်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို နှစ်ပတ်သုံးပတ်လှည့်လိုက်တယ်။ အတီးအမှုတ်တွေနဲ့ပေါ့။ အရမ်းပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်နော်။ ညီရဲတို့ ဒေသက သီတင်းကျွတ်ပွဲကိုလည်း မြင်ဖူးချင်သေးတယ်။ နောက် သီတင်းကျွတ်ရင် လိုက်လည်မယ်နော်။
တောက်ပကြယ်စင် 16 October 2011 at 03:34
တိုင်ဆိုတာက ဖြတ်ထားတဲ့ ၀ါးလုံးတွေရဲ့ထိပ်မှာ ကြိုးနဲ့ချီထား၊ အဲဒီကြိုးပေါ်မှာ ပလပ်စတစ်ဆီမီးတွေကို ချိတ်ထားလိုက်တယ်။ ခုနက ပြောတာ မရှင်းမှာစိုးလို့ ထပ်ပြောခြင်းဖြစ်တယ် ကိုညီရဲရေ။